Ny Mpamaritra Matoanteny
Zavatra Telo loha no hodinhintsika amin’ity Lesona 20 ity :
- Ny Filàza Tsy Misy Mpamaritra.
- Ny Mpamaritra Matoanteny.
- Ny Ho Avy sy ny Fiforonany.
1.- Ny Filàza Tsy Misy Mpamaritra:
Ireto no Zava-dehibe tsy tokony hohadinoina:
Amin’ny Hebreo , dia manana Endrika roa ny “Filàza Tsy Misy Mpamaritra” :
- Rehefa ampiasaina tsy misy “Fameno” izy.
- Rehefa ampiasaina miaraka amin’ny “Mpampiankin-teny” izy.
Amin’ny ankapobeny, dia tena mitovy tanteraka ny “Filàza Mandidy” amin’ny “Mpisolotena Faharoa Lahy Samirery” sy ny “Filàza Tsy Misy Mpamaritra Mirafitra” Faharoa.
Tsy manana “Filàza Tsy Misy Mpamaritra” ny Endrika Fahefatra = Pu’al .
Toy izao avy ireo Endrika sisa amin’ny “Filàza Tsy Misy Mpamaritra” sy ny Heviny avy:
Qâl : קשר Qâshar = Mamatotra = Mamehy = Mangeja .
Niph’al : נקשר Niq’shar = Voafatotra = Voafehy = Voageja .
Pi’el : קשר Qisher = Namatotra Mafy = Namehy Mafy = Nangeja Mafy .
Hiph’il : הקשיר = Hiq’shiyr = Nampamatotra = Nampamehy = Nampangeja .
Hoph’al : הקשר = Hôq’shar = Nampamatorina = Nampamehezina .
Hith’pa’el : התקשר Hith’qasher = Namatotena = Nanao Tadimody ny Tenany .
2.- Ny Mpamaritra Matoanteny sy ny Fiforonany:
Betsaka no tokony hodinihintsaka eto , izay avelantsika ho amin’ny Boky Faharoa no handalinana azy misimisy kokoa . Ny zava-dehibe tsy tokony hohadinoina kosa no jerentsika amin’ ireto Endrika Telo ireto:
21.- Endrika Voalohany = Qâl :
Mba hahazoana ny “Mpamaritr Matoanteny” amin’ity Endrika Voalohany = Qâl , ity dia:
Ampiana “Hôlem” ( Teboka . eo ambonin’ny ו Vav ) eo amin’ny « Mpisolotena Voalohany » amin’ny « Fototeny ».
Ary « Tsereiy » .. kosa eo amin’ny « Mpisolotena Faharoa » .
Ohatra : קושר Qôsher = AM-pamatorana = FatorINA = FatorANA.
קושרת Qôshêrêth ( Rehefa Vavy Samirery ).
קושרים Qôsh’riym ( Rehefa Lahy Filàza-Maro ).
קושרות Qôsh’rôth ( Rehefa Vavy Filàza-Maro ).
22.- Endrika Faharoa = Niph’al :
Amin’ny Endrika Faharoa « Niph’al », dia mitovy tanteraka tsy misy valaka amin’ny
anaran’ny « Niph’al » ihany ny « Mpamaritra Matoanteny », fa saingy ny « Patah » kosa no miova ho « Qâmets ».
Ohatra : נקשר Niq’shar = VOAfatotra izy ( misy Tovona VOA ) .
נקשרת Niq’shêrêth ( Rehefa Vavy Samirery ).
נקשרים Niq’shâriym ( Rehefa Lahy Filàza-Maro ) .
נקשרות Niq’shârôth ( Rehefa Vavy Filàza-Maro ).
23.-Endrika Fahatelo sy ny Manaraka = Pi’el :
Manomboka eto amin’ny Endrika Fahatelo = Pi’el, ny fahazoana ny “Mpamaritra Matoanteny”, dia ny fanovana ny ת Thav amin’ny Mpisolotena Faharoan’ny « Ho Avy » hanjary ם Meiym .
Pi’el : Ny תקשר Th’qasher = Hamatotra Mafy ‘Ianao , dia miova ho מקשר M’qasher = AM-pamatorana Mafy ‘Ianao ( Misy ny Tovona AM- eto ).
Pu’al : Ny תקשר Theqoushar = Ho Voafatotra Mafy ‘Ianao , dia miova ho מקשר Meqoushâr = VOAfatotra Mafy ‘Ianao ( Misy ny Tovona VOAeto ).
Hiph’il : Ny תקשר Thaq’shir = Hampamatotra ‘Ianao , dia miova ho מקשיר Maq’shiyr = AM-pamatoraNA ‘Ianao ( Misy ny Tovona AM sy ny Tovana ANA eto ) = Mbola eo AM-…’Ianao .
Hoph’al : Ny תקשר Thôq’shar = Hampamatorina ‘Ianao , dia miova ho מקשר Mouq’shâr =TAFAfatotra ( ihany ) ‘Ianao ( Misy ny Tovona TAFA eto ).
Hith’pa’el : Ny תתקשר Thith’qasher = Hamatotena ‘Ianao = Hanao Tadimody ny Tenanao ‘Ianao , Dia miova ho מתקשר Mith’qasher = MAMatotena ‘Ianao ( Misy ny Tovona MAM eto ) . Izny hoe MIfatotra = MIkambana = MIfikitra = MIraikitra ( Misy ny Tovona MI eto ).
24.- Tsiahy :
Amin’ny Endrika Voalohany = Qâl , dia misy ny Mpamaritra Matoanteny Iharana, dia ny :
Tovona VOA = VOAfatotra ( Samirery ) . VOAfatotra ( Filàza-Maro ).
NY HO AVY SY NY FIFORONANY
1. Teny Mitarika:
Tamin’ny Lesona Faha-19 no nanombohantsika nandinika ny “Ho Avy” Voajerintsika tamin’
ny ankapobeny izy tamin’izay. Fa amin’ity Lesona ity kosa, dia hodinihintsika akaiky ny amin’ny
Fiforonan’izany “Ho Avy” izany.
Ny “Ho Avy” amin’ny “Qâl” , amin’ny “Matoanteny” קשרQâshar , dia אקשר ‘Êq’shor , ary ahazoana ny אקשר ‘Eq’shor = Hamatotra Aho.
Ny “Ho Avy” amin’ny “Niph’al” , amin’ny נקשר Niq’shar , dia אקשר ‘Êqasher , ary dia ahazoana ny אנקשר ‘En’qâsher = Ho Voafatotra Aho = Ho Voageja Aho.
Manomboka eto amin’ny « Pi’el” , dia tena manampy amin’ny fahafantarana ny “Ho Avy” ny anaran’ireo Endrika samihafa . Ohatra ireto :
Pi’el : Ny קשר Qisher , dia ahazoana ny אקשר ‘Aqasher = Hamatotra Mafy Aho.
Pu’al : Ny קשר Qoushar , dia ahazoana ny אקשר ‘Aqoushar = Ho Voafatotra Mafy Aho.
Hiph’il : Ny הקשיר Hiq’shiyr , dia ahazoana ny אקשיר ‘Aq’shiyr = Hampamatotra Aho.
Hoph’al : Ny הקשר Hôq’shar , dia ahazoana ny אקשר ‘Ôq’shar = Hampamatorina Aho.
Hith’pa’el : Ny התקשר Hith’qasher , dia ahazoana ny אתקשר ‘Êth’qasher = Hamato tena Aho = Hanao Tadimody ny Tenako Aho.
Misy zava-dehibe efatra tsara horaketina , ka anaovantsika izao Famakafakana manaraka izao:
21.- Hiph’il :
Raha misy “Hîrik” iray eo am-piandohan’ny Teny, ka arahin’ny “Shêva”, dia tokony ho tadidiana tsara, fa “Shêva” niova endrika ihany io “Hîrik” io.
Ny הקשיר Hiq’shiyr , dia tsy hafa akory fa fiovana niainga avy amin’ny הקשיר
Ny tena endriky ny « Ho Avy » mantsy dia ny אהקשיר ‘Eheq’shiyr , fa saingy niendaka ny ה Heiy , noho izy nialohavan’ny “Shêva” , ka izay sisa tafajanona aminy , dia ny אקשיר ‘Eq’shiyr = Hamatotra Mafy Aho.
Kanefa satria “Shêva” anankiroa no nifanesisesy amin’io Teny iray io, dia voatery tsy maintsy miova ho “Patah” ny “Shêva” Voalohany . Ny “Patah” mantsy no manavaka indrindra ny “Hiph’il” , arak’izany dia ny אקשיר ‘Aq’shiyr no tena raikitra ho “Hiph’il” amin’ny “Ho Avy”.
22.- Hoph’al :
Ny tena endriky ny “Ho Avy” amin’ny “Hoph’al” , dia tokony ho אהקשר ‘Ehôq’shar , noho izy avy amin’ny הקשר Hôq’shar .
Kanefa satria ialohavan’ny « Shêva » ny ה Heiy , dia mazava ho azy, fa tsy maintsy miendaka izy.
Ary satria niendaka ny ה Heiy , dia nifindra eo amin’ny Litera iray eo alohany ny Zana-tsoratra teo aminy mba hisolo toerana ny « Shêva” . Noho izany, dia ny אקשר ‘Ôq’shar =
Hampamatorina Aho . no raikitra ho « Hoph’al » amin’ny « Ho Avy ».
23.- Hith’pa’el :
Ny endrika “Hith’pa’el” התקשר Hithqasher , dia avy amin’ny התקשר Heth’qasher .
Ary ny « Ho Avy » amin’ity endrika ity, dia tokony ho אהתקשר ‘Eheth’qasher , fa saingy niendaka ny ה Heiy noho izy nialohavan’ny “Shêva” . Ary dia ny אתקשר ‘Eth’qasher = Hamato-tena Aho = Hanao Tadimody ny Tanako Aho , no sisa tafajanona.
Noho ny fisian’ny א ‘Aleph teo aminy ary , dia :
i)- Niova ho « Sêgôl » ny « Shêva” Voalohany eo amin’ny “Mpisolotena Voalohany”.
ii)- Niova ho « Hîrik » kosa ny eo amin’ny « Mpisolotena » sisa rehetra.
Arak’izany, dia ny אתקשר ‘Êth’qasher = Hamatotena Aho , no tena raikitra ho « Hith’pa’el » , amin’ny « Ho Avy ».
Ny ה Heiy , izay niendaka noho ny « Tovona » tamin’ireo endrika telo vao nodinihintsika teo alohan’izao , dia miverina amin’ny toerana nialany avy hatrany, raha vao esorina ny « Tovona »
tahaka izay hitantsika amin’ny « Filàza-Mandidy ».